10-ka Nin Ee Adduunka Ugu Dhaadheer Wakhtigan, Dalalka Ay U Dhasheen, Dhererkooda Iyo Sida Ay U Kala Dheer Yihiin | Gaaloos.com
Home » galmada » 10-ka Nin Ee Adduunka Ugu Dhaadheer Wakhtigan, Dalalka Ay U Dhasheen, Dhererkooda Iyo Sida Ay U Kala Dheer Yihiin
10-ka Nin Ee Adduunka Ugu Dhaadheer Wakhtigan, Dalalka Ay U Dhasheen, Dhererkooda Iyo Sida Ay U Kala Dheer Yihiin
1. Sultan Kösen – 2.51 cm
Waxa la isla waafaqsan yahay in uu yahay ninka adduunka ugu dheer. Waxa uu u dhashay wadanka Turkiga. Sultan Kösen Dhererkiisu waa Laba Mitir iyo kow iyo konton sintimitir (2,51cm). Xirfaddiisu waxa ay ahayd laacib kubadda kolayga ah, waxaanu dhalasho ahaan asalkiisu ka soo jeeda qawmiyadda Kurdida. Waxa uu dhashay 1983-kii, waxaana si rasmi ah loogu aqoonsaday ninka adduunka ugu dheer sannadkii 2009 sida uu xaqiijiyey Genius World Record. Sultan … waxa uu 2013 guursaday gabadh yar oo Suuriyaan ah oo dhererkeedu dhan yahay 1,72cm kadib muddo 5 sanadood ah oo uu guur meer ahaa.
2. Ibrahim Taqillah (Brahim Takioullah) – 2.46 cm
Ninka labaad ee qiimaynta adduunka ee dhererka loo qaatay waa Ibrahim Taqillah. Ibraahim Taqillah waxa uu dalka Morocco ku dhashay 1982kii. Waxa kale oo loo aqoonsaday ninka adduunka ugu Cago dhaadheer. Tani waa xaalad ku timaad inta badan dadka dhaadheer iyada oo qaybo jidhkooda ka mid ah korriinku iska sii socdo oo dheecaano gaar ahi noqdaan kuwo aan u shaqayn sidii saxda ahayd. Waxa uu wakhtigan ku nool yahay dalka Faransiiska oo loo geeyey daaweyn dhinaca xangullayaasha ah.
3. Murtada Mehrzad – 2.42 cm
Ninka saddexaad ee loo aqoonsaday in uu yahay kan ugu dheer adduunku waa Murtada Mehrzad oo 1987-kii ku dhashay tuulo yar oo ku taalla wadanka Iiraan. Waxa ay isna dhibaato ka haysataa dhinaca xididada xangulayaasha loo yaqaano. Xanuunka ku dhacay waxa uu ku keenay in jidhkiisu si aan dabiici ahayn xubno gaar ahi isaga koraan oo aan joogsi lahayn sida gacmaha iyo lugaha. Markii da’diisu ahayd 16-jir waxa uu la kulmay shil mooto, shilkaasi oo ku keenay in korriinkiisii lugta midig u joogsado si aan dabiici ahayn, waxaanu wakhtigan yahay nin ay labadiisa lugood kala weyn yihiin. In ka badan 15 cm ayay labadiisa lugood kala weyn yihiin.
4. Zhang Juncai – 2.42cm
Zhang Juncai waa Nin u dhashay wadanka Shiinaha, waxaana uu ku nool yahay gobolka Shansi ee dalkaasi. Waxa uu buugga dhacdooyinka layaabka leh lagu ururiyo ku galay kaalinta afraad ee dhinaca adduunyada isaga oo dhinaca kale qiimayntaasi ku noqday ninka ugu dheer waddanka Shiinaha. Qiimayntaasi waxa lagu sameeyey 2004.
5. Nasir Axmed Somro – 2.38cm
Nasir waa ninka shanaad ee adduunka ugu dheer waxaanu u dhashay wadanka Pakistan. Waxa loo aqoonsaday ninka ugu dheer wadanka Pakistan isaga oo heer caalamina ka soo galaya kaalinta 5aad. Waxa uu ku nool yahay Islamabad waxaanu dhashay sannadkii 1975. Waxa uu ka shaqeeyaa goob lagu tababaro ardayda dugsiga waxaanu bixiyaa xiisadda jimcsiga iyo jidh dhiska.
6. Sun Ming Ming – 2.36cm
Sun waxa uu heer caalami ka soo galayaa ninka lixaad ee adduunka ugu dheer. Waxa uu u dhashay wadanka Shiinaha waana laacib ka tirsan naadiyada heerka koowaad ee kubadda kolayga horyaalka Shiinaha. Waxa uu dhashay 1983-kii. Shil baabuur oo uu galay sannadkii 2005 ayaa ku keenay in jidhkiisu sii daayo hormoono dhinaca korriinka ah oo aan dabiici ahayn, waxaanu wakhtigaasi bilaabay dhererka xad dhaafka ah ee uu leeyahay walina isma taagin oo waa socdaa. Wakhtigan waxa uu u wareegay horyaalka Kubadda Kolayga ee dalka Maraykanka MBA. Waxaanu wakhtiyada qaarkood ka qayb qaataa jilidda Filimada isaga oo lagu xasuusto doorkii uu ku lahaa filimkii caan baxay ee Rush Hour 3 ee ay wada jilayeen Jackie Chan iyo Chris Taker.
7. Bao Xishun – 2.36cm
Bao Xishun waxa uu u dhashay wadanka Mangolia ee qaaradda Asia. Waxa uu ku shaqaystaa xirfadda xoolo raacnimada waan anin adhi jir ah. Isaga oo 16 jir ah ayuu bilaabay korriin aan caadi ahayn waxaanu dhererkiisu yahay 2,36cm. waxa uu la dhibaataysan yahay cudurka lafaha ee romatiisamka.
8. Ridwan Sharbib – 2.36cm
Kaalinta 8aad ee liiskan 10-ka qof ee adduunka dheer waxa ku jira Ridwan Sharbib oo u dhashay wadanka Tunisia ee qaaradda Afrika. Dhererkiisu waa 2,36. Inkasta oo xaalado caafimaad darro la soo gudboonaadeen haddana wali waa nool yahay waxaanu wakhtigii hore ahaa nin kubadda kolayga ciyaari jiray. Waxaanu wakhtigan marmar ka qayb qaataa jilidda filimada carabta isaga oo lagu xasuusto doorkii uu ku lahaa Filimki caan baxay ee (Xarbul Kawaakib).
9. Brand Adams – 2.35cm
Adams waa wiil dhallinyaro ah oo u dhashay wadanka Maraykanka kuna nool magaalada Washington oo ah halkii uu ku dhashay 1995. Waxa loo aqoonsaday ninka dhallinyaro ah ee adduunka ugu dheer balse dadka waaweyn ka soo galaya kaalinta 9aad. Khalal kaga yimid koromosoomka 12aad ayaa keenay in uu si degdeg ah u dheeraado. Waxa la isku dayay dhawr jeer in la koojiyo korriinkiisa walise laguma guulaysan.
10. Igor Vovkovinskiy – 2.34cm
Igor Vovkovinskiy waa Ninka tobnaad ee adduunka ugu dheeri waa Igor oo u dhashay wadanka Ukraine balse wakhtigan haysta dhalashada wadanka Maraykanka oo uu ku nool yahay. Waa nin jilaa ah oo dhinaca filimada ka qayb qaata. Da’diisu waa 30-jir waxaana lagu tiriyaa dadka ugu dheer dunida ee ku nool Maraykanka. Isaga oo 7 jir ah ayaa la geeyey cisbitaalka Gobolka Minnesota si looga daaweeyo dhibaato caafimaad. Waxa uu ku soo caan baxay filimka Hall Pass ee sannadkii 2011 dunida caanka ka noqday.
Title: 10-ka Nin Ee Adduunka Ugu Dhaadheer Wakhtigan, Dalalka Ay U Dhasheen, Dhererkooda Iyo Sida Ay U Kala Dheer Yihiin